चोटिला उपहारहरू! :: Setopati
सजना सुनार माघ १४
ल्यापटपको ठूलो पर्दामा गुगलका केही तस्वीर हेर्दै थिएँ। फोटो तलमाथि सारिरहेका बेला मलाई छेउमा बसेकी मेरी १० वर्षीया बहिनीले रोक्दै ल्यापटपतिर औलाले अंकित गर्दै भनिन्, 'दिदी हजुरलाई याद छ, हामी एकपटक यसैगरी धेरै मान्छेसँग नयाँ ठाउँमा गएर खाना खाएका थियौं नि है।'
बहिनीको यो कुराले मलाई अचम्म लाग्यो। त्यतिखेर उनी मात्र चार वर्षकी थिइन्। त्यो समय र समयले लगाएको छाप अझै उनको दिमागमा ताजै रहेछ। उनको त्यो मधुर बोलीले मलाई सबै याद दिलायो।
२०७१ सालतिरको कुरा हो। सधैं आफ्नै ताल र बाटोमा हिँड्ने खहरे खोला मदिराले मातेको बौलाहाजस्तै चिच्याउँदै कराउँदै बस्तीतिर पसेको थियो। त्यसले भर्खरै बास पाएका खोला किनारको सुकुम्बासी बस्तीसहित वरपरका बस्ती उजाडिदिएको थियो।
त्यसै बेला हो हामी पनि सेल्टरमा बस्न बाध्य भएका थियौं।
बहिनीले भनेको कुराले म स्तब्ध हुँदै उनका शब्दलाई सर्मथन गरेँ। तर उनलाई अझ धेरै जान्नु थियो, उनी उत्सुक हुँदै अर्को प्रश्न मैतिर तेर्स्याइन्, 'दिदी, त्यो बेला के भएको थियो? त्यति धेरै पानी कहाँबाट आएको थियो।'
मैले उनलाई सरल भाषामा सम्झाउने प्रयास गरेँ, 'बहिनी हामीले गरेका केही काम हाम्रो प्रकृतिलाई मन नपरेको हुनाले प्रकृति हामीसँग रिसाएको हो। तिमी त्यसलाई विपद भनेर बुझ्न सक्छौ। जुन प्राकृतिक वा अप्राकृतिक रुपमा हुन सक्छ।'
उनलाई प्रष्ट बनाउँदै भनेँ, 'हामी त्यतिखेर (२०७१) को बाढीको विपदमा परेका थियौं। हामी सुर्खेतबासी मात्र नभई दाङ, बर्दिया र बाँके लगायतका जिल्लामा बस्ने व्यक्तिहरू हामीजस्तै पीडित हुनुपरेको थियो।'
'सायद तिमीलाई थाहा नहोला, तराईमा हरेक वर्ष शीतलहरले मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्। २०७२ को भूकम्पले ढालेको धरहरा अझै पनि ठडिएको छैन। कयौं विस्थापित परिवारको घर बन्न सकेका छैनन्। कालिकोटको पलाँताको एउटै बस्तीमा सल्केको आगोको रापले त्यहाँका मानिसलाई अहिले पनि गलिरहेका झैं छन्। भूगोल र परिवेश अनुसार कहीँ तातो हावा (लू) लाग्छ भने कहिले हावा हुरी बतास आइदिन्छ। कहीँ चट्याङ पर्छ भने कहीँ असिनाले बालीनाली नष्ट गरिदिन्छ। कहिले खडेरीले भोकमरी नै आइदिन्छ। जस्तै अहिले हामी कोरोना संक्रमणको महामारीमा छौं,' म भन्दै गएँ।
(लेखक सजना सुनार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ सुर्खेतकी बासिन्दा हुन्)